Wararka Maanta: Jimco, May 10, 2013-Qaramada Midoobay oo sheegtay in Kumannaan Askarta AMISOM ka tirsan lagu dilay Somalia Tan iyo Sannadkii 2007
Ku xigeenka xoghayaha guud ee Qaramada Midoobay, Jan Eliasson ayaa u sheegay Reuters in dalalka ka tirsan AMISOM ay naftooda qaaliga u hureen sidii ay Soomaaliya nabad uga dhalin lahaayeen, isagoo sheegay in tirade ay tahay mid aad u badan.
“Waad ka argagaxaysaa markii aad ogaato in 3,000 oo askari oo AMISOM ka tirsan ay ku dhinteen howgalka nabad ilaalinta Soomaaliya, askartan oo dhan waxaa la dilay intii uu howlgalku socday,” ayuu Eliasson yiri.
Ciidamada AMISOM ee ku sugan gudaha Soomaaliya ayaa waxay tiradoodu tahay 17,700 oo askair, kuwaaso ka kala socda dalalka Uganda, Burundi, Jabuuti, Kenya iyo Sierra Leone.
“Dalalka Uganda iyo Burundi ayay askarta badankood ka dhinteen,” ayuu ku daray hadalkiisa. “Ciidamada Kenya oo qayb ballaaran ka ah AMISOM ayaa iyagana ay soo gaartay dhimasho.”
Tirada ciidamada AMISOM kaga dhimatay howlgalka Soomaaliya ayaa waxay ku dhow dahay tiradii ciidamada Qaramada Midoobay ee howgallada ku dhintay tan iyo sannadkii 1948-kii taasoo gaaraysa 3,096 oo askari.
Howlgalka AMISOM ayaa wuxuu ka caawiyaa dowaldda Soomaaliy a sidii ay isaga difaaci lahayd Al-shabaab, iyadoo labadii sano ee lasoo dhaafay ay ka qabsadeen ciidamadan isbahaysanaya Al-shabaab dhul ballaaran oo ku yaalla Koonfurta Soomaaliya.
Cadadka ciidamada AMISOM ee ku dhintay dagaallada lagula jiro Al-shabaab ayaa noqonaya kuwii ugu badnaa ee la shaaciyo, iyadoo dalalka ay AMISOM ka socdaan sida Uganda iyo Burundi ay dhowr jeer beeniyeen tiro la sheegay in looga dilay dagaallada Soomaaliya ka socda.
Hadalkan ayuu Eliasson ka sheegay shirkii London lagu qabtay ee yabooha loogu raadinayya Soomaaliya, iyadoo kooxda ay AMISOM dagaalka kula jirto ee Al-shabaab ay weli awood u leeyihiin inay fuliyaan qaraxyo iyo weerarrro toos ah.